EyoMnga ngo-2020 - Iphepha 2 lama-29 - Funda ukurhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin Cash (BCH): I-BCH Rejection Rejection kwi-380 yeeRandi zokuXhathisa okungaphezulu, zidibanisa ngaphezulu kwe- $ 340
Ukunyuka okuphezulu kwe-BCH kujongene nolunye ukwaliwa kwi $ 380
I-altcoin iwela kwi-340 yeedola kwaye iphinda iqale ukudityaniswa phakathi kwe- $ 320 kunye ne-360 yeedola
Ixabiso langoku: $ 352.23
Intengo yeNtengiso: $ 7,392,791,728
Umthamo wokuThengisa: $ 4,712,115,752
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngo-Disemba 30, 2020
Ngomhla wama-28 kuDisemba, i-BCH yaphinda yaphindisela i- $ 380 yokuphikisa ngaphezulu kwaye yachaswa. I-crypto iwele kwi-340 yeedola esezantsi kwaye iphinde yahlanganiswa kwakhona. Kwintshukumo yexabiso elidlulileyo, i-BCH yangena kwi-68 yeedola emva kokuvavanya i-380 yeedola yokuxhathisa ngaphezulu ngoDisemba 20. Okwangoku, i-BCH iwele kwi-340 yeedola. I-crypto ngoku idibanisa phakathi kwe- $ 340 kunye ne-360 yeedola. Isaphulelo esomeleleyo ngaphezulu kwama- $ 340 asezantsi siyophula i-360 kunye ne- $ 380 kumanqanaba oxhathiso. Ikhefu elingaphezulu kwe- $ 380 ukumelana liya kukhawulezisa ukuhamba kwamaxabiso ngaphezulu.
I-Bitcoin Cash iwele kwinqanaba le-53 ye-Relative Strength index period 14. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla we-uptrend. Ixabiso liphulwe ngaphantsi kwe-21-day SMA. Ikhefu elingezantsi kwee-SMAs liya kuphakamisa intshukumo ezantsi yengqekembe.
Ukunyuka okuphezulu kunokwenzeka ukuba i-380 yeedola yokuchasana ngaphezulu yaphuliwe. NgoDisemba i-27 uptrend; Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH inokuthi inyuke kwaye ifike kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Yiyo ingqekembe eya kunyuka iye kwi-404.14 ephezulu yeedola.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): Iinzame ze-Ether zokuLaphula amaNqanaba amaxabiso kwi-838 ka-Epreli 2018
U-Ether wophula ukumelana ne- $ 660, efikelela kwinqanaba eliphezulu lama- $ 757
I-Ethereum inexabiso ekujoliswe kulo le- $ 838
Ixabiso langoku: $ 744.23
Intengo yeNtengiso: $ 84,886,671,193
Umthamo wokuThengisa: $ 17,074,355,224
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 800, $ 820, $ 840
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 360, $ 340, $ 320
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngo-Disemba 30, 2020
Iinkunzi zeenkomo ze-Ethereum ziye zaqhubeka nokutyhala ngaphezulu njengoko ingqekembe ifikelela kwi-757 yeedola ephezulu. Eyona altcoin inkulu ijongene nokwaliwa njengoko kuvavanya indawo yokumelana ne- $ 760.
Kucingelwa ukuba xa iphula i-760 ye-zone yokumelana nengqekembe, ingqekembe iya kufumana i-838 yexabiso le-Epreli 2018. Kwelinye icala, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukophula eli nqanaba lokumelana, ingqekembe iya kunyanzeliswa ukuba iye ecaleni. Ngenye indlela, ukuba i-Ether iyawa kwaye yaphuka ngaphantsi kwe- $ 700, i-downtrend iya kuphinda iqale.
I-Ethereum iqhubekile nokuhlala ngaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla othengiweyo wentengiso. Kwimarike eyomeleleyo eqhubekayo, imeko egqithisileyo ayinakubamba. I-RSI ikwinqanaba lama-68 elibonisa ukuba i-crypto ayinandawo yaneleyo yokuhlangana phezulu.
Eyona altcoin inkulu kukunyuka okuphezulu. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukunyuka okuphezulu kwengqekembe. Ingqekembe iye yaphula ukumelana ne- $ 660. Ngomhla kaNovemba 23 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ibonisa ukuba intengiso iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yeFibonacci eyandisiweyo okanye ephezulu yeedola ezingama-806.19.
IFransi 40 (iFR40EUR) idibanisa ngaphezulu kwenqanaba lama-5500, kunokwenzeka ukuba iqhubeke kwakhona phezulu
IFransi 40 (i-FR40EUR) yexesha elide: Ukuma
IFransi 40 isalathiso esecaleni sihamba ngezantsi kwenqanaba lama-5600. Iinkunzi zeenkomo kusafuneka zikophule ukumelana kwinqanaba le-5600. Ngomhla wamashumi amabini ananye kuDisemba, iinkunzi zeenkomo zagxothwa njengoko isalathiso sehla saya kwinqanaba lama-21 kwaye senyuka. Ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa liya kubonisa umqondiso wokuqalisa kwakhona.
Isalathiso okwangoku sikwinqanaba lama-58 le-Index ye-Relative Strength period 14. Kukwindawo ye-uptrend kwaye ngaphezulu kwe-centerline 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonakalisa ukunyuka.
IFransi 40 (FR40EUR) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iFrance 40 inyukele phezulu. Isalathiso sikwiintshukumo zoluhlu olubophelelweyo olungezantsi kwama-5600. Ixabiso liyehla emva kokusilela ukungena ekumelaneni kwinqanaba lama-5600. Ixabiso liya kuwa kwinqanaba lama-5500 kwaye liqhubeke phezulu.
IFransi 40 okwangoku ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bearish umfutho. Imilinganiselo ehambayo isatyibilika ecaleni ibonisa imarike esecaleni.
Imbonakalo Jikelele yeFrance 40 (FR40EUR)
IFransi 40 ngoku isendleleni esecaleni. Ngo-Novemba, iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula ukunganyangeki kwinqanaba lama-5600. Okwangoku, isalathiso sisahla sinyuka ngaphantsi koxinzelelo lwentloko.
Amakethi abuye aPhezulu kwiNtengiso ye-Post-Brexit
Iindaba ezintsha ezilungileyo-inkxaso ye-Nkulumbuso yase-Bhritane u-Boris Johnson ovela kwi-Conservative Party. NgoLwesibini, amagosa ombutho athe enza isivumelwano "Ixhasa ulawulo lwase-UK" kwaye yacela iNdlu yeeNdlu ukuba ivote ixhasa oko.
Unyaka awupheli kakubi kangangoko unakho. Isalathiso se-stock global seMSCI AC World sibonise ukwanda nge-14% kwinyanga ephelileyo, kwaye ukukhula ngokubanzi emva kokuwa ngoMatshi bekuphantse kwaba ngama-68%. Iimakethi ngoku zijolise ekuvuseleleni uqoqosho kwaye umgaqo-nkqubo wezemali othambileyo uxhasa iinkomo.
Izinto zinokukhohlisa kwintengiso yotshintshiselwano lwangaphandle. I-euro iyaqhubeka nokuhla inyuka ngokujikeleza okuphezulu konyaka. I-Sterling ayingxami ngokuhlaziya ukuphakama kwayo kwinyanga elandelayo yesivumelwano se-EU-UK. I-euro ikwabuyisa iirekhodi zayo. Abahwebi bayaqhubeka nokuvavanya iziphumo zokurhoxa, kwaye ayisiyiyo yonke into engenafu apha. Iinkampani zamalungiselelo aseYurophu ziyarhoxisa izivumelwano zokuthuthwa kwempahla, esoyika ukubuya kwazo zingenanto emva koJanuwari 1.
Iimarike zentengiso ziyaqhubeka nokuhlangana phakathi kolwamkelo lwesitofu seCovid-19 esenziwe yi-AstraZeneca kunye neDyunivesithi yaseOxford. Eli nyathelo liza kunceda i-UK inyuse ugonyo ukusukela ngoMvulo weveki ezayo.
Abathengisi beDola babuyela kwiMarike
Idola lahlala liphantsi kokuthengisa uxinzelelo. I-Aussie, i-euro, kunye ne-loonie zonke zibetha phezulu minyaka le xa kuthelekiswa nedola ebethiweyo, nangona imali ngokubanzi irhoxile ngaphambi kokuvala. Iimali ezixabisekileyo zorhwebo zezona zomeleleyo, zincediswa ziziphumo eziqinisekileyo zeWall Street njengoko ii-indices zaseMelika zadlala ngothando oluphezulu.
Ukuphela konyaka kusondele, ukuthengiswa kwedola kuye kwaphinda kwakhona. Ngelixa izitokhwe zaseMelika zancwina ubusuku bonke, iimarike zaseAsia, ngaphandle kweJapan, zisathenga ngokuqinileyo. Ngelixa i-euro yomelele xa ithelekiswa nedola, ixutywe nezinye iimali ezinkulu zaseYurophu. Okwangoku, i-loonie isalele ngasemva kwe-Aussie kunye ne-kiwi kuthengiso lwangoku oluyingozi. Igolide kunye neoyile nazo zihlala kuluhlu olulinganiselweyo.
Isivumelwano sotyalo-mali se-EU-China kuthiwa siyaqhubeka; Isivumelwano sinokubhengezwa kamva. Siyakukhumbuza ukuba umhla wokugqibela weengxoxo awukude.
tags Iposi yeposi yeBrexit, KwiDola yaseMelika
I-EUR / CHF ikwiNdlela esecaleni yokuHamba, ukuLa ubuso ngobuso kwinqanaba le-1.0860
Amanqanaba okuGxila aphambili1.0800, 1.0900, 1.1000
Amanqanaba enkxaso aphambili1.0600, 1.0500, 1.0400
I-EUR / CHF Ixabiso leXesha elide leXesha: Bullish
I-EUR / CHF yenza intshukumo ephezulu. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba le-1.0860. Isiphatho sezibane mihla le sinemisonto emide ebonisa ukuba kukho uxinzelelo lokuthengisa olomeleleyo kumanqanaba aphezulu amaxabiso. NgoDisemba 17 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Esi sibini siya kuphakama kwaye sifikelele kwinqanaba elingu-1.618 Fibonacci. Lelona nqanaba liphezulu le-1.0923.
I-EUR / CHF-Itshathi yemihla ngemihla
Iibini zikwinqanaba lama-58 leNdawo yamaXabiso aMandla aNxulumene naMandla ixesha eli-14. Oku kuthetha ukuba ixabiso likummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ibonisa imeko esecaleni.
I-EUR / CHF yexesha eliphakathi eTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso siphinde saqala phantsi ukwehla. Ukunyuka okuphezulu kufikelele kwinqanaba eliphezulu le-1.0890. Ixabiso lehle ukusuka kwinqanaba le-1.0890 ukuya kwi-1.0820 ephantsi kwaye yaqhubeka kwakhona phezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokumelana kwinqanaba le-1.0850.
I-EUR / CHF-4 itshathi yeyure
Iintsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMAs zijike ziye phezulu zibonisa uptrend. Iibini zingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikumfutho wokuqhubela phambili.
Imbonakalo ngokubanzi ye-EUR / CHF
I-EUR / CHF iqale kwakhona ukunyuka kwayo. Iimarike ziyajika nanini na xa isibini sifikelela kwinqanaba eliphezulu le-1.0850. Ngokwesixhobo seFibonacci, uptrend wangoku uya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-1.0995.
tags YeEUR / CHF, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-USD / CAD ye-Retests yeNqanaba le-0.2800 kwaye iqala kwakhona ukuya ezantsi
I-USD / i-CAD yeXesha leXesha leXesha ekuHanjiswa ngalo: Bearish
ILoonie iye yaya ezantsi. Ukudodobala kunokwenzeka ukuba kuqhubeke. Nge-14 kaDisemba kwehla ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba isibini siza kuwela kwinqanaba elingu-1.618 Fibonacci extensions. Oko kukuthi, ukuhla ezantsi kuya kuthi ga kwinqanaba eliphantsi le-1.2383.
I-USD / CAD-Itshathi yemihla ngemihla
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambekele ezantsi ezibonisa ukwehla. ILoonie iwele kwinqanaba lama-39 leNdawo yokuDityaniswa kwaMandla aNxulumene naMandla lixesha elingaphantsi kwama-14.
I-USD / CAD yexesha eliphakathi eTrend: Ukuthwala
Kwitshathi yeyure e-1, isibini sisehla. Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Oku kuthetha ukuba isalathiso siya kuwa kwinqanaba le-1.618 yolwandiso lweFibonacci. Oku kusezantsi kwe-1.2719.
I-USD / CAD-1 Itshathi yeYure
Okwangoku, ii-SMAs zijongela emazantsi zibonisa ukwehla. ILoonie ingaphantsi kwenqanaba lama-20% le-stochastic yemihla ngemihla. Kukwimeko ye-bearish. Esi sibini siphinde saqala phantsi ukuhamba kwaso.
Imbonakalo ngokubanzi ye-USD / CAD
I-USD / CAD iye yaya ezantsi. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, intengiso iya kufikelela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye i-1.2719. Kunokubakho enye intshukumo ezantsi emva koku.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, USD / CAD
Ukunyuka kwi-Gold Longs
Emva kokubetha okudala nokwala i-1900 yabuyela emva kwi-1870 kwaye ibithengisa ngaphakathi kwe-150 yeepayipi yeeseshoni ezi-2 ezidlulileyo.
Sisathengisa ngaphakathi kwithuba eliphakathi lokwakheka kwesakhiwo kwaye kufanele ukuba amaxabiso aphuke nanamhlanje kwaye iindawo eziphakamileyo zayizolo ukuphinda kubuye kwakhona kwindawo ye-1900-1905 kuya kudlalwa.
I-DXY iyaqhubeka nokwenza ezantsi ezisezantsi ezinyusa igolide kwixesha elifutshane.
Uhlalutyo lwamaxabiso egolide-nge-30 kaDisemba
Igolide (i-XAU / i-USD) iqhubekeke nohambo lwayo olusecaleni kwiseshoni yase-Yurophu yokuqala ngolwe-Lwesithathu, njengoko imveliso itshixelwe kwidabi ngexabiso le- $ 1880.
Isinyithi esimthubi asinakho ukwenza imali kwiveki ephelileyo ye-bounce elungileyo kwi-1900 yengqondo yengqondo phakathi kokukhula komngcipheko wentengiso. Uluvo lwehlabathi luqinise ngakumbi kwisibhengezo samva nje sokuba abalawuli base-UK bavumile ukusetyenziswa kweyeza lokugonya i-AstraZeneca / Oxford Coronavirus.
Ukongeza, ithemba lomnye umjikelo woncedo lwezezimali e-US kunye nolindelo olukhulayo lokuvuselelwa koqoqosho olomeleleyo kwi-2021 luboleke ngakumbi kumngcipheko wokutya. Le mvakalelo yomngcipheko yabonwa njengenye yezinto ezibalulekileyo ezijongela phantsi ibango lempahla ekhuselekileyo yesiqhelo, kubandakanya negolide.
Okwangoku, inqwelomoya eqhubekayo evela kwidola yaseMelika (DXY) ibonelele ngenkxaso kwimpahla yeedola kwaye iye yathintela nakuphi na ukwehla okukhulu. I-greenback yeza phantsi koxinzelelo oluhlaziyiweyo emva kweNkokeli enkulu ye-Senate uMitch McConnell ethintele iinzame zokuzisa intlawulo ye-COVID-19 ukuya kwi- $ 2,000 ukusuka kwi- $ 600 ebicetywe ekuqaleni.
Abathathi-nxaxheba kwimakethi ngoku bazakujonga idatha yoqoqosho yase-US namhlanje – ebonisa i-Goods Trade Balance, iChicago PMI, kunye neNtengiso yeKhaya yokuThengisa-yeendlela zokurhweba. Ukukhutshwa kwedatha, kudityaniswa nemeko ebanzi yemarike, kunokuchaphazela amaxabiso edola, anokuchaphazela iXAU / USD ngokungazi.
I-XAUUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela - ngoDisemba 30
I-XAU / i-USD Bias enkulu: Iindlela
Amanqanaba okubonelela: $ 1893, $ 1900, kunye ne-$ 1907
Amanqanaba okufuna: $ 1876, $ 1865, kunye ne-$ 1859
Igolide ihlala iqinile kwimodi yokudibanisa phakathi kwe- $ 1893- $ 1859 zones pivot. Nangona kunjalo, imveliso yorhwebo ibonakala ikwahambelana nomjelo okhoyo ngoku, njengoko uqhubeka nokurekhoda amanqaku aphezulu. Le nto ibonakalisa kakuhle ukuba iinkunzi zeenkomo zisalawula, nangona kungekho zenzo zingako.
Oko kwathethi, silindele ukuba isinyithi esixabisekileyo siqhubeke nokuqhubeka nomjelo wethu ojonge phezulu kwiiyure nakwiintsuku ezizayo. Ukuwa kweli nqanaba kunokubuyiselwa kwinqanaba le-pivot eyi- $ 1859 kwaye, emva koko, ngenkxaso ye- $ 1850.
I-GBPJPY yokuTsala okuqinisekileyo iyaqhubeka ngaphaya kwePhawu le-140.00
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-nge-30 kaDisemba
Iponti yaseBritane ibambe ukubuyela umva ngokuchasene neJapan Yen, isibini sibuyela umva ngaphezulu kweempawu ze-140.00. Uluvo olusezantsi lokujongela phantsi indawo ekhuselekileyo ye-JPY kwaye yahlala ixhasa iPound yaseBritane.
Amanqanaba okumelana: 142.71, 141.21, 140.31
Amanqanaba enkxaso: 139.47, 138.00, 137.00
I-GBPJPY yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
Umnqamlezo we-GBPJPY owakhiwe ngomhla wokuqala wangaphambi kokubuya kwaye uqhubeke nokunyuka kwiiyure zokuqala zeseshoni yaseYurophu ngoLwesithathu. Isantya satyhala umnqamlezo ngaphaya kwe-140.00 yendawo yokubonelela ephezulu ngeenzame zokwaphula imiqobo ye-140.31.
Uhlalutyo lobuchwephesha luqaqambisa ukuba ipateni enkulu kakhulu yokuguqula imeko isasebenza kumaxesha amadala. Thenga kwi-dip kwisicwangciso-qhinga esiphambili kubarhwebi bexesha eliphakathi ukuya kwelide le-GBPJPY okoko ixabiso liphethe ngaphezulu kwe-1.3800.
Njengoko kunokubonwa kwixesha elifutshane, imeko ngokubanzi kwi-GBPJPY itshintshile kancinane njengoko kulindeleke kwangaphambili ukuba imodareyithwe ngenkxaso encinci kwi-139.47 eseleyo. Irali engazinzanga ukusuka kwi-137.00 kufuneka ijolise kwi-141.21 ephezulu. Nangona kunjalo, ukuphuma kwe-139.47 kunokutshintsha imeko yexesha elincinci kwi-bearish iye kwi-steeper eyehle ngezantsi kwe-138.00.
Kufuphi nomda osezantsi, kukho inkxaso yomgca wokunyuka kwi-137.00. Ikhefu elingaphantsi kweli nqanaba liya kuvula umnyango, ngokuthetha ngobuchwephesha, ukubuyela kwiindawo ze-136.00 kwaye kwinqanaba le-133.03 yengqondo (le yokugqibela ingaphantsi kolu luhlu lukhankanywe ngasentla).
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 29 abaDala izithuba →